Italy နိုင်ငံထုတ် TELME ရေခဲမုန့်စက် - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 1120 view counts
Italy နိုင်ငံထုတ် TELME ရေခဲမုန့်စက်
Brand : TELME
Model : COMBIGEL3e 3A, COMBIGEL 8e8A
လုပျငနျးအမညျ : IKON Mart Trading Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : PH - +95-1- 534216, 527705, 501429, 011222498,+95-9- 401 567 324
WIDTH/DEPTH/HEIGHT : 74x45x105 cm
POWER : 14 A - 5,6kW V 400 - 50 - 3
CONDENSATION : water
MAX. MIX PER CYCLE KG : 3÷6
LENGHT OF WORKING CYCLE MINUTES : 10÷20
HOURLY PRODUCTION L : 15÷30
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Italy နိုင်ငံထုတ် TELME ရေခဲမုန့်စက်ကြီးများဖြင့်ပြုလုပ်၍ သန့်ရှင်းပြီး အရသာရှိသော Italy ရေခဲမုန့်များကို စုံလင်သောအရသာများဖြင့် စားသုံးသူများစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူနိုင်အောင် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် Stramondo ရေခဲမုန့်များကို ရောင်းချပေးနေပါသည်။ Stramondo ရေခဲမုန့်များကို Stramondo မှ Powder မှုန့်များနှင့် သဘာဝနွားနို့ သဘာဝသစ်သီးများ၏ အရသာများအတိုင်းသာအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် လူကြိုက်များနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး စားသုံးချင်သည့်အရသာအတိုင်း အရသာမပျက်အောင် ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့စားသောက်ဆိုင်များ နှင့်ရေခဲမုန့်ဆိုင်များကိုပါအများဆုံးပြန်လည်ရောင်းချပေးနေသော Stramondo ရေခဲမုန့်။ ကိုယ်ပိုင်ရေခဲမုန့်ဆိုင်လေးဖွင့်ချင်သူများအတွက်လည်း ရေခဲမုန့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများအပြင် စက်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ IKON MART တွင် စုံလင်စွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့် အနီးတ၀ိုက်များသို့ 10 KG မှာယူပါက လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် တစ်ရက်ကြိုတင်၍မှာယူနိုင်ပါသည်။
Hot Line: 09253066191 အီတလီနိုင်ငံထုတ်စက်ကြီးများဖြင့် သဘာဝသစ်သီးများ၏အရသာအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားခြင်း။ စုံလင်သောအရသာများရှိခြင်း။
ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး မူလအရသာမပျောက်ပျက်သည့်အတွက် လူကြိုက်များခြင်း။
အရသာကောင်းမွန်သည့်အတွက် ဟိုတယ်ကြီးများနှင့် ရေခဲမုန့်ဆိုင်အများစုမှဝယ်ယူအားပေးနေခြင်း။
ကိုယ်ပိုင်ရေခဲမုန့်ဆိုင်ဖွင့်ချင်သူများအတွက်လည်း ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုပါသင်ကြားပြသပေးနိုင်ခြင်း။
အလှူမင်္ဂလာပွဲများ၊ မွေးနေ့ပွဲများအတွက် 10 KG မှာယူပါကလည်း ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတ၀ိုက်သို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း။
စသည့်အချက်များကြောင့်လူကြိုက်များကျော်ကြားနေသည့် အီတလီနိုင်ငံထုတ် Stramondo Gelato Homemade Ice Cream ဖြစ်ပါသည်။
IKON Mart Trading Co.,Ltd သည် Hotel သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး နှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအသုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး တို့ကို တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပါသည်။ Hotel လုပ်ငန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းသုံး အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာထဲတွင် ချိုသာသော ဈေးနှုန်းများနှင့် ရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။ JVD အမှတ်တံဆိပ်သည် ဟိုတယ်လ်လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးမြင့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Electronic door locking system များ၊ ဟိုတယ် အခန်းတွင်း ပြင်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ နှင့် သန့် ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများစသည့်JVD ၏ ထုတ်ကုန်များကို IKON MART တွင် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချပေးနေပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ၏ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက IKON Mart ကို ဆက်သွယ်လိုပါက E Mail :fbasstmgr.ikon@gmail.com သို့ လည်းကောင်း၊ No.328-A, Pyay Road, Sanchaung P.O. ( 11111 ), Yangon, Myanmar. ဖုန်းနံပါတ် 01-534216, 01527705, 01501429 ကိုလည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိူင်ပါသည်။
Victoria Arduino Athenaleva, ကော်ဖီဖျော်စက်
For Italy နိုင်ငံထုတ် TELME ရေခဲမုန့်စက်
May I get the quotation for "Italy နိုင်ငံထုတ် TELME ရေခဲမုန့်စက်" ?